Mogadishu Journal » 2020 » January » 4
Coronavirus: Fourteen transport workers die in London after contracting COVID-19
Coronavirus: PM spends the night in intensive care after struggling to breath
Sir Keir Starmer elected new Labour leader
//January 4, 2020
Aqalka Sare oo Guddi u saaray Sharciga doorashooyinka
Mjournal :-Gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa Magacaabay Guddi ku saabsan ka shaqeyn Sharciga doorashooyinka oo lagu waddo in dhawaan la horgeeyo Aqalka Sare. Guddiggaan ayaa ka kooban 7 xubnood oo ka tirsan Aqalka Sare, waxaana ay ka shaqeyn doonaan sidii...
Wasiirka Maaliyadda oo qaabilay wafdi ka socda Bangiga Horumarinta Afrika
Mjournal :-Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ku soo dhaweeyay xarunta Wasaaradda Maaliyadda xubno ka socday Bangiga Horumarinta Afrika. Xubnaha wafdigan ka socday Bangiga Horumarinta Afrika (African Development Bank) oo uu...
Waa Kuma Laacibka Manchester United Ka Tirsan Ee Fadhiga Ka Kiciyey Jurgen Klopp?
Mjournal :-Dhawaan ayay ahayd markii ay kooxaha Liverpool iyo Sheffield United ciyaari ku dhex martay gegida Anfield kulankaas oo ay Reds kusoo ceshadeen hoggaankoodii 13-ka dhibcood ahaa oo ay 2-0 kaga guuleysteen Blades. Mid kamida dhacdooyinka kulankaas ayaa ahaa in goolhayaha...
Ilhan Omar oo golaha Congress ugu baaqday inay joojiyaan in Maraykanku dagaal la galo Iran
Mjournal :-Xildhibaan Ilhan Omar oo Congress-ka Maraykanka ku metasha gobolka Minnesota, ayaa kasoo horjeesatay in Maraynku dagaal la galo dalka Iiran. Hadalkeeda ayaa daba socday kadib markii Maraykanku duqayn cirka oo ka dhacday Baqdaad uu ku dilay Madaxii ilaalada kacaanka...
Jubbaland oo ka warbixisay Xaaladda degaanadii laga saaray Al-Shabaab
Mjournal :-Taliyaha guud ee ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland Gen. Aadan Maxamuud Ibraahim ayaa faahfaahin ka bixiyay Xaaladda degaano dhawaan Ciidanka Jubbaland ay kala wareegeen Al- Shabaab ee ka tirsan gobolka Jubbada hoose. Taliyaha ayaa sheegay in nolosha dadka ay kuso...
Dowladda oo amartay in la xayiro Akoonada Maamulka Galmudug
Mjournal :-Warqad ka soo baxday xaafiiska hanta dhowraha guud ee Qaran ayaa dalbaday in la hakiyo habka kharash bixinta maamul goboleedka Galmudug markii laga reebo bixinta mushaharaadka shaqaalaha iyo kharashka ku baxaya ciidanka.
Sheekh Shariif oo Fashil ku eedeeyay Madaxda tallada heysa
Mjournal :-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ku sugan Magaalada London ee UK ayaa sheegay in maanta dalka uu baahan yahay isbadel maamul, islamarkaana laga doonaayo dadka Soomaaliyeed in ay hormuud ka noqdaan. Sheekh Shariif ayaa sheegay in maanta...
Mareykanka oo Duqeyntii ugu horeysay 2020 ka fuliyay Shabeellaha Hoose
Mjournal :-Taliska Ciidanka Mareykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano AFRIOM ayaa faah faahin ka bixiyay duqeyn diyaaradeed oo saacadihii lasoo dhaafay uu ka fuliyay deegaan ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraal kasoo baxay AFRICOM ayaa waxaa lagu sheegay in duqeynta ay...
Dil ka dhacay magaalada Boosaaso iyo faah-faahin ka soo baxeysa
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya kooxo hubeysan oo xalay Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari ku dilay Sarkaal la sheegay inuu ka tirsan Ciidanka maamulka Puntland. Dilkaan ayaa waxaa uu ka dhacay Xaafad ka tirsan Boosaaso, waxaana Sarkaalka ka tirsanaa...
U CODEEY MAADAXWEYNAHA SOOSOCDA